ကစားသမားဘ၀တစ်လျှောက် Wayne Rooney အနီကတ်ပြသခံခဲ့ရတဲ့ဖြစ်ရပ်များ
22 Aug 2019 . 5:55 PM
ရွန်နီ Wayne Rooney ဟာ အရင်တကည်းက ဒေါသအိုးတစ်ယောက်ဆိုတာ အထူးပြောစရာ လိုမယ်မထင်ပါဘူး။ မထင်ရင် မထင်သလို ပြိုင်ဘက်ကို အသားလွတ် Foul လုပ်တတ်တာကြောင့် အနီကတ်ဆိုတာက သူ့အတွက် သိပ်စိမ်းတဲ့အရာတစ်ခု မဟုတ်တာ အသေအချာပါပဲ။ ငယ်ငယ်တုန်းက လူငယ်စိတ်နဲ့ဆိုတော့ စိတ်လွတ်ကိုယ်လွတ်ဖြစ်တာက လက်ခံလို့ရပေမယ့် အသက်ကြီးလာတော့လည်း ကြမ်းတုန်းရမ်းတုန်းဆိုတော့။
ပြီးခဲ့တဲ့ ဧပြီလတုန်းက လော့စ်အန်ဂျလိစ်အသင်းနဲ့ ကစားခဲ့တဲ့ မေဂျာလိဂ်ပွဲမှာ ပြိုင်ဘက်ကို ခပ်ကြမ်းကြမ်း ဖျက်ထုတ်ခဲ့လို့ တိုက်ရိုက်အနီကတ်နဲ့ ထုတ်ပယ်ခံခဲ့ရပြီး အခုလည်း နယူးယော့ခ်ရက်ဒ်ဘူးလ်နဲ့ပွဲမှာ ပြိုင်ဘက်အသင်း ကွင်းလယ်လူ Casseres ကို ပြစ်ဒဏ်ကျူးလွန်ခဲ့တာကြောင့် အနီကတ်နဲ့ ထုတ်ခံခဲ့ရပြန်ပါပြီ။ ဒါဟာ ရွန်နီရဲ့ ကစားသမားဘ၀တစ်လျှောက် (၇)ကြိမ်မြောက် ပြသခံခဲ့ရတဲ့ အနီကတ်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဒေါသအိုးရွန်နီရဲ့ ကစားသမားဘ၀တစ်လျှောက် အနီကတ်နဲ့ ထုတ်ပယ်ခံခဲ့ရတဲ့ဖြစ်ရပ်တွေကို ပရိသတ်တွေ သိရှိနိုင်အောင် ဖော်ပြလိုက်ရပါတယ် . . .
၂၀၀၂ ဘာမင်ဂမ် ၁-၁ အဲဗာတန် (တိုက်ရိုက်အနီ)
ရွန်နီဟာ ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်မှာ အဲဗာတန်အသင်းအတွက် ပွဲထွက်ခင့်ရပြီး မကြာခင်မှာပဲ အနီကတ်အရသာကို စတင်မြည်းစမ်းခွင့်ရခဲ့ပါတယ်။ ၂၀၀၂၊ ဒီဇင်ဘာ (၂၆)ရက်က ဘာမင်ဂမ်နဲ့ကစားခဲ့တဲ့ပွဲမှာ ပြိုင်ဘက်ကို ခြေစုံပစ်ဝင်ခဲ့တာကြောင့် အနီကတ်နဲ့ထုတ်ပယ်ခံခဲ့ရတာပါ။
၂၀၀၅ ဗီလာရီးယဲလ် ၀-၀ မန်ယူ(နှစ်ဝါတစ်နီ)
ဒီပွဲကို ကြည့်လိုက်ရတဲ့ မန်ယူပရိသတ်တွေ မှတ်မိကြဦးမယ်ထင်တယ်။ (၆၄)မိနစ်မှာ ပြိုင်ဘက်ကို ပြစ်ဒဏ်ကျူးလွန်ခဲ့တဲ့အတွက် အ၀ါကတ်ပြသခံရချိန်မှာ ဒိုင်လူကြီးရဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်ကို မကျေနပ်တာကြောင့် လက်ခုပ်တီးလှောင်ပြောင်ခဲ့လို့ နောက်တစ်ဝါထပ်ပြခံရတာဖြစ်ပါတယ်။
၂၀၀၆ ပေါ်တူဂီ ၁-၃ အင်္ဂလန် (တိုက်ရိုက်အနီ)
ဒီဖြစ်ရပ်ကိုတော့ ပရိသတ်တွေ ဘယ်တော့မှ မေ့နိုင်မှာ မဟုတ်ပါဘူး။ ပေါ်တူဂီနောက်ခံလူ ကာဗယ်လ်ဟို Ricardo Carvalho နဲ့ ဘောလုံးယှဉ်လုရင် မတော်တဆတက်နင်းမိတာကို အဲဒီအချိန်က မန်ယူအသင်းဖော် စီရော်နယ်လ်ဒို Cristiano Ronaldo က ဒိုင်လူကြီးကို အသည်းအသန် စောဒကတက်ခဲ့တာကြောင့် တိုက်ရိုက်အနီနဲ့ ထုတ်ပယ်ခံခဲ့ရတယ်။ ရွန်နီ အနီကတ်နဲ့ထုတ်ပယ်ခံရချိန်မှာ စီရော်နယ်လ်ဒို မျက်လုံးတစ်ဖက်မှိတ်ပြခဲ့တာကလည်း မီဒီယာစာမျက်နှာတွေပေါ်မှာ ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် ရေပန်းစားခဲ့ပါတယ်။
၂၀၀၆ ပေါ်တို ၁-၃ မန်ယူ (တိုက်ရိုက်အနီ)
၂၀၀၆-၀၇ ရာသီကြိုခြေစမ်းပွဲအဖြစ် ပေါ်တိုနဲ့ကစားခဲ့တဲ့ပွဲမှာ ရွန်နီဟာ ပေါ်တိုနောက်ခံလူ ပီပီ Pepe ကို တံတောင်စွမ်းပြခဲ့လို့ ပထမပိုင်း(၄၂)မိနစ်မှာ တိုက်ရိုက်အနီကတ်နဲ့ ထုတ်ပယ်ခံခဲ့ရပါတယ်။
၂၀၀၉ ဖူလ်ဟမ် ၂-၀ မန်ယူ (နှစ်ဝါတစ်နီ)
ဒီတစ်ကြိမ်အနီကတ်ကလည်း ရွန်နီ စိတ်မထိန်းနိုင်ခဲ့လို့ ပြသခံခဲ့ရတာပါ။ ပထမတစ်ဝါထိထားတဲ့ ရွန်နီဟာ (၈၉)မိနစ်မှာ ဒိုင်လူကြီးရဲ့ ပြစ်ဒဏ်ဘောပေးမှုကို မကျေနပ်ဘဲ ဘောလုံးကို ဒေါသတကြီး ပစ်ခဲ့တာကြောင့် နောက်တစ်ဝါထပ်ပြခံခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။
၂၀၁၁ မွန်တီနီဂရိုး ၂-၂ အင်္ဂလန် (တိုက်ရိုက်အနီ)
မန်ယူအသင်းနဲ့ အနီကတ်ထိတာ ရိုးလာတဲ့ ရွန်နီဟာ ဒီတစ်ကြိမ်တော့ အပြောင်းအလဲဖြစ်အောင် အင်္ဂလန်အသင်းနဲ့ အနီကတ်ပြသခံလိုက်ပါတယ်။ ၂၀၁၁၊ အောက်တိုဘာလ (၇)ရက်တုန်းက မွန်တီနီဂရိုးနဲ့ ကစားခဲ့တဲ့ ခြေစစ်ပွဲပွဲမှာ မွန်တီနီဂရိုး ကစားသမားတစ်ဦးကို အသားလွတ်ကန်ခဲ့လို့ တိုက်ရိုက်အနီကတ်ပြသခံခဲ့ရပါတယ်။
၂၀၁၄ မန်ယူ ၂-၁ ၀က်စ်ဟမ်း (တိုက်ရိုက်အနီ)
ဒီအနီကတော့ တော်တော်လေးဆိုးရွားလွန်းပါတယ်။ ၀က်စ်ဟမ်းတောင်ပံကစားသမား ဒေါင်းနင်း Stewart Downing ဘောလုံးဆွဲပြေးချိန်မှာ အသားလွတ်ကန်လိုက်တာကြောင့် တိုက်ရိုက်အနီနဲ့ ထုတ်ပယ်ခံခဲ့ရတာပါ။
ပရိသတ်ကြီးရေ .. ဒါကတော့ ကစားသမားဘ၀တစ်လျှောက် ရွန်နီ အနီကတ်ပြသခံခဲ့ရတဲ့ အဖြစ်အပျက်တွေပါပဲ။ အသက်(၃၃)နှစ်အရွယ်ရှိနေပြီဖြစ်ပေမယ့် ဒေါသမထိန်းနိုင်သေးတဲ့ ရွန်နီ ဒီထက်ပိုပြီးရင့်ကျက်လာမယ်လို့ မျှော်လင့်ရတာပါပဲ . . .
ရွန်နီအနီကတ်ပြခံခဲ့ရတဲ့ဖြစ်ရပ်များကို ကြည့်ရန် ရုပ်သံလင့်ခ်
Photo:Sky Sports,90Min,GiveMeSport,Metro,The Telegraph,The Independent,Washington Post